गुल्मीको ठूलो लुम्पेकमा फागुन १५ मा प्रथम सहिद लखन थापा मगरको शालिक अनावरण हुने – www.janabato.com
Latest Taja-update गाउँघर समाचार
१४ फाल्गुन २०७४, सोमबार १३:२७ February 27, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
जनबाटो संवाददाता । गुल्मी, फागुन १५– ३६ औं मगर एकता दिवसको अवसर पारेर गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका वडा नं. ३, ठूलो लुम्पेकमा प्रथम सहिद लखन थापा मगरको शालिक अनावरण हुने भएको छ ।
सत्यवती गाउँपालिका वडा नं.३ र नेपाल मगर संघ ठूलो लुम्पेक गाउँ समितिको संयुक्त आयोजनामा प्रथम सहिद लखन थापा मगरको शालिक अनावरण गर्न लागिएको हो । प्रथम सहिद लखन थापा मगरको शालिक नेपाल मगर संघका संस्थापक सचिव तथा मगर आदिकवि जीतबहादुर सिंजाली मगरले गर्ने वडा नं. ३ का अध्यक्ष रुकवहादुर राना मगरले बताए ।
उक्त अवसरमा आदिकवि जीतवहादुर सिंजाली मगर र प्रथम सहिद लखन थापा मगरको शालिक बनाउने मूर्तिकार कुशल थापा मगरलाई सम्मान समेत गर्न लागिएको अध्यक्ष राना मगरले बताए । शालिक अनावरणका कार्यक्रममा ठूलो लुम्पेकका मगर तथा गैरमगरहरुको विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी सहित सहभागि हुने आयोजकले बताएको छ । केही बर्ष अगाडी देखि ठूलो लुम्पेकमा नेपाल मगर संघले मगर एकता दिवस मनाउदै आएको छ । प्रथम सहिद लखन थापा मगरको शालिक वडा कार्यालयको अगाडी ल्हुम्पेक थानीको थान नजिकै देउरालीमा रहने आयोजकले बताएको छ ।
प्रथम सहिद लखन थापा मगरको जन्म वि.सं.१८९१ (ई.सं.१८३४) मा हालको गोरखा जिल्ला, बुङकोट–४ को काहुलेभङ्गारमा भएको थियो । राष्ट्रप्रेमको भावना बोकेर उनी बीस वर्षको उमेरमा गोरखगणमा उनी भर्ना भए । चौध वर्षको सैनिक जीवनमा कप्तान पदमा पुगे । लखन थापाले जयसिंह चुमीमगर, शुकदेव गुरुङ्ग, सुपति गुरुङ्ग, ज्ञान दिलदास व्राम्हण र कानु लम्साल आदिका सहयोगबाट स्थानीय युवाहरुको विद्रोही फौज संगठित गरे । यसो गरेवापत उनलाई विं.सं.१९३३ फागुन २ गते दरबार अगाडिको खिर्राको बोटमा उनलाई झुन्ड्याइएको थियो ।
२०७२ असोज ३ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयले ‘लखन थापा मगरलाई नेपालको प्रथम सहिद घोषणा गरेको थियो ।
फोटो–भुवन थापा ‘बहुवि’
← बुटवलमा दिवंगत पत्रकार देवबहादुर पाटा मगरको ९ औं स्मृति दिवस सम्पन्न
मगर जाति र फागुन १५ को महत्व →
जनतामा करको आतङ्क, दक्षिण एसियाकै महङ्गो
८ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०३:१४ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on जनतामा करको आतङ्क, दक्षिण एसियाकै महङ्गो
उत्तर कोरियाले भन्यो–‘परमाणु कार्यक्रमबारे वार्ता गर्न सकिन्न’
५ कार्तिक २०७४, आईतवार ०२:३७ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on उत्तर कोरियाले भन्यो–‘परमाणु कार्यक्रमबारे वार्ता गर्न सकिन्न’
२४ पुष २०७५, मंगलवार १४:४८ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on भारतीय वैज्ञानिकको चुनौती : ‘न्युटन र आइन्स्टाइनले विज्ञान बुझेका थिएनन्’